Kedu ihe kpatara ị ga-eji nye Neogegraphers dịka Google - Geofumadas
Ntak emi ọfọn mme Neogeographers nte Google
June, 2009 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GvSIG, Microstation-Bentley
Nke a bụ aha nke ajụjụ ahụ Eric Van Rees mere na ndị ikom dị mkpa nke ụlọ ọrụ atọ pụrụ iche na teknụzụ geoinformatics:
Jack Dangermond, Onyeisi nke ESRI
Richard Zambuni, Director nke Geospatial Bentley
Ton de Vries, Onye isi nke Bentley na akara nke Cadastre na mmepe ala
Halsey maara ihe, President na CEO nke Akwukwo
Ihe odide a na-adọrọ mmasị, ọ na-abịa mgbe mmalite nke teknụzụ desktọọpụ (Desk GIS) agbanweela nke ukwuu na web (web GIS) yana njikọta ya na CAD enweela ọganihu dị ukwuu. Ewezuga uto na nkwado nke ụkpụrụ nke mgbanwe na njikọta weebụ.
Ajuju ajuju ajuju ajuju di iche iche di iche iche, nke ndi obula n’ime ha choro uzo nke ulo oru ha megide usoro ahia. Ndị a bụ ajụjụ ndị a sụgharịrị na ọ bụghị n'ụzọ nkịtị:
Gịnị ga-abụ ọrụ ndị ọkachamara GIS n'ọdịnihu? Hà ga-enwe ọkachamara na sayensị kọmputa ma ọ bụ na ha ga-anọgide na-ewere onwe ha ndị ọkachamara na GIS? Ma ọ bụ, anyị nwere ike ịchọrọ ndị ọkachamara nwere ikike dị ukwuu maka nkà na ụzụ, akụnụba, nkà mmụta sayensị na iwu gbasara ihe ọmụma?
Ị chere na ngwá ọrụ GIS dabeere na desktọọpụ ga-aga n'ihu ma ọ bụ dochie ngwaọrụ ndị nwere ihe nkesa?
Ụlọ ọrụ gị nwere ibu ọrụ maka nsogbu ụwa? Nke a na-agụnye ohere iji tinye GIS n'ọrụ? Oleekwa otú?
Na Europe ụlọ ọrụ GIS dabeere na INSPIRE, GMEIS, SEIS na GALILEO n'oge ahụ. Na United States nke a enweghị mmasị ha, enwere m echiche na ebe a ụlọ ọrụ dabere na ihe Google, Microsoft na Yahoo na-eme na otu esi ejikọ ha. Kedu ihe bụ uche gị banyere ya?
Njikọ nke CAD na GIS bụ ikike nke na-adịwanye mkpa kwa ụbọchị. Kedu ihe ngwọta ụlọ ọrụ gị nwere ugbu a iji nweta njikọta GIS-CAD a? Kedu otu esi ahụ ọdịnihu: anyị ga-aga n'ihu na-ahụ ọpụrụiche abụọ a ma ọ bụ ka ị chere na oge ga-abịa maka ha abụọ inwe njikọta zuru oke?
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya, ị ghaghị gaa na nke June nke magazin bụ Geoinformatics, nke na-eweta isiokwu mmasị dị ka:
Data sonar maka mmiri ahụ
Ejila ala na Australia
Jiri software GIS n'efu na-egosipụta ụwa. Nke a bụ ịga n'ihu na ahịrị nke ha si na atọ nsụgharị mbụ gbasara ihe eji emeghe GIS. Isiokwu ahụ na-adọrọ mmasị, dabere na akwụkwọ Gary E. Sherman, nke nwere aha ahụ, lee eserese na ọnọdụ ha nyere gvSIG na ọkwa ọpụrụiche onye ọrụ.
AutoDesk, na-azọpụta obodo site n'ọtụtụ mmadụ
Usoro Cicade & DIMAC.
Previous Post«Previous Wii, kacha mma njem m
Next Post GIS software - akọwapụtara na okwu 1000Next »